အခြေခံအသက်ကယ် အထောက်အကူပြုနည်း - Thutazone
By ThutammPosted on August 19, 2018 August 24, 2018
ရေးသားသူ – ကောင်းကြီး(မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်)
ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာ သင်တဲ့ရက်တိုသင်တန်းလေးက တစ်ဆင့်ပြန်လည်မျှဝေပေးပါ့မယ်။ လူတိုင်းနီးပါးသိထားသင့်တယ်ထင်လို့ပါ…မိမိချစ်ခင်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို မိမိကိုယ်တိုင်..အသက်ကယ်ခွင့် ကြုံလာရင်အသုံးချနိုင်အောင်ပါ…
ရုတ်တရက် အသက်ရှူခြင်းနှင့်.နှလုံးခုန် ရပ်သွားခဲ့သော လူနာတစ်ယောက်ကို အသက်ကယ်လိုပါလျှင် ကွင်းဆက် ၄ ခုကိုမနှောင့်မနှေး ဆက်တိုက် အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးရန်အထူးလိုအပ်ပါသည်.။
ပထမကွင်းဆက်ကလူနာ လဲကျသွားသည်နှင့် တပြိုင်နက် အနီးအနားရှိသူတစ်ဦးက ချက်ချင်းဆေးရုံ ဆေးခန်းများအားအကြောင်းကြားရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဒုတိယကွင်းဆက်က ထိူသူကပင် လူနာရဲ့နှလုံးပုံမှန်ပြန်လည်ခုန်လာပြီး အသက်ပြန်ရှူလာအောင်အမြန်ဆုံး..အခြေခံအသက်ကယ်နည်းအထောက်အကူပြုနည်းကို သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တတိယကွင်းဆက်ကတော့ ဆေးရုံဝန်ထမ်းများရောက်ရှိလာပြီး လူနာကို ဆေးရုံအရေးပေါ်ဌာန သို့ပို့ကာနှလုံးနှိုးဆက် defibrillator တို့ကိုသုံးကာ နှလုံးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ခုန်လာအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးကွင်းဆက်ကတော့ လိုအပ်ပါက အထူးကြပ်မတ်ဆောင်တွင် အသက်ရှူ အထောက်အကူပြုစက် စသည်တို့ဖြင့် အသက်ရှုပုံမှန်ဖြစ်သွားသည်အထိ အမြန်ဆုံးအဆင့်မြင့် စောင့်ရှောက်ကုသမှု ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ရုတ်တရက် အသက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်သော အကြောင်းအရာများ
နှလုံးရောဂါ ဟူသမျှသည် နှလုံးခုန်ခြင်းကို ရုတ်တရက်ရပ်တန့်စေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နှလုံးသွေးကြောပိတ်သွားလျှင် နှလုံးခုန် ရုတ်တရတ် ရပ်သွားတတ်ပါသည်။သို့ဖြင့် နှလုံးသွေးကြောပိတ်သည့် လူနာများ၏ ထက်ဝက်မျှသည် ဆေးရုံသို့ မရောက်နိုင်ဘဲ ဖြစ်သည့်နေရာတွင်ပင် ရုတ်ချည်းအသက်ဆုံးရှုံးတတ်ပါသည်။
အရာဝတ္ကုများကြောင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့သွားပါကလည်း အသက်ရှူရပ်ပြီး ၄-၅မိနစ်အတွင်း နှလုံးခုန်ပါရပ်တန့်သွားနိုင်ပါသည်။ ကလေးများတွင် မကြာခဏ လေ၀င်လမ်းကြောင်း ကိုအရာဝတ္ကုများပိတ်ဆို့တတ်ပါသည်။ လူကြီးများ အစားအစာ ပိတ်ဆို့ကာသော်လည်းကောင်း သတိမေ့မြောနေစဉ် ပါးစပ်ထဲရှိ သွားတုများ အန်ဖတ်များပိတ်ဆို့သွားကာသော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် လျှာအနောက်သို့ ခေါက်ဝင်သွားကာသော်လည်းကောင်း ရုတ်တရက် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ပြီး အသက်ရှူ နှလုံးခုန် ရပ်သွားနိုင်ပါသည်။
ရေနစ်လျှင် အသက်ရှူရပ်ပြီး မကြာမီ နှလုံးခုန်ပါရပ်တန့်သွားစေပါသည်။
လေဖြတ်သူတွင် အသက်ရှူခြင်းကို ထိန်းချုပ်သည့် ဦးနှောက်၏ အစိတ်အပိုင်းတွင်သွေးကြောပိတ် သွေးယိုသွားပါက ရုတ်ချည်းအသက်ရှူရပ်ပြီး မကြာမီ နှလုံးခုန်ပါ ရပ်တန့်သွားနိုင်ပါသည်။
အချို့သောဆေးများ..အလွန်အကျွံသောက်သုံးမိပါကလည်းအသက်ရှူခြင်းကို ထိန်းချုပ်သည့် ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းပျက်စီးပြီး နှလုံးခုန်ပါရပ်တန့်နိုင်ပါသည်။
၆။ မီးခိုးများ ရှူမိခြင်း
မီးလောင်စဉ်အတွင်း မီခိုးများကိုရှုမိလျှင်လည်းအသက်ရှူရပ်ကာ အသက်ဆုံးနိုင်ပါသည်။
ရင်ခေါင်းပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရလျှင်လည်း နှလုံးခုန် အသက်ရှူရပ်နိုင်ပါသည် (ကားတိုက်မှု)
အထက်ပါဖော်ပြပါ အခြေအနေများတွင် လူနာများအား အချိန်မီ ကယ်မည့်သူ မရှိလျှင် ရာနှုန်းပြည့် အသက်ဆံုးရုံးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် အသက် ရှူခြင်းနှင့် နှလုံးခုန် ရပ်သွားသည်ကို ယေဘုယျအားဖြင့် သေသည် ဟု မှတ်ချက်ချလေ့ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ၄မိနစ် မှ ၆မိနစ် အတွင်း လျင်မြန်ဖြတ်လတ်စွာ အခြေခံအသက်ကယ်အထောက်အကူပြုနည်းကို ကျင့်သုံးပေးပါက လူနာများ၏ ထက်ဝက်သည် အသက်ပြန်လည် ရှင်လာနိုင်သည်ဖြစ်ပါသဖြင့် လူတိုင်းသည် အခြေခံအသက်ကယ်အထောက်အကူပြုနည်းကို ကျင်လည်မှန်ကန်မြန်ဆန်စွာ ကျင့်သုံးပေးတတ်ရန် လိုအပ်သည်ကို အသိပေးနှိုးဆော်လိုပါသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် နှလုံးရပ်သွားသည်ကို သေသည်ဟု လက်သင့်ခံ ထားသည်။ နှလုံးကို ၄မိနစ်မှ၆မိနစ် အတွင်းပြန်လည် ခုတ်မောင်းအောင်ပြုလုပ်မပေးနိုင်ပါက ဦးနှောက်ပျက်ဆီးသွားသည်ဟု ဇီဝဆိုိင်ရာ သေဆုံးခြင်းဟုခေါ်တွင်ပြီးထိုအခြေအနေဖြစ်လာလျှင်လူ၏ အသက်ကို ရှင်လာနိုင်ရန်မည်သို့မျှ မဆောင်ရွက်နိုင်တော့ပါ။
၀-၄ မိနစ် ဦးနှောက်ပျက်ဆီးမှုမရှိသေး။
၄-၆မိနစ် ဦးနှောက်ပျက်ဆီးမှု ဖြစ်နိုင်ချေရှိ။
သို့ဖြစ်၍ လူနာတစ်ယောက်သည် အသက်ရှု နှလုံးခုန်ရပ်သွားလျှင် ၄မိနစ်မှ၆မိနစ် အတွင်းအခြေခံအသက်ကယ်အထောက်အကူပြုနည်းဖြင့် ကယ်တင်ရန်အလျင်အမြန် ကြိုးပမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
၁။ လူနာနှင့် ဘေးအနီးရှိ အခြေခံအသက်ကယ် အထောက်အကူပြုမည့်သူကို စိတ်ချရသောနေရာ တွင်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ လူနာကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားရင်း.မိမိပါအသက်ကိုထိခိုက်နိုင်မှုကင်းအောင်ပါ။ ဥပမာ..မီးလောင်နေတဲ့ အိမ်ထဲမှာ….
၂။ ရုတ်တရက်လဲကျသွားသောသူအား ပထမဦးစွာ သတိရှိမရှိ ဆန်းစစ်ကြည့်ရမည်။ လူနာ၏ ပခုံးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်လှုပ်၍ သတိရသလား ဟုကျယ်လောင်စွာအော်၍ မေးပါ။
၃။ လူနာသတိရှိပါက လူနာနေသာသောအနေအထားတွင် ထား၍ပုံမှန်ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။
လူနာသတိမရှိပါက အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်ကိုခေါ်ပါ။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွင်အခြားသူတစ်ယောက်ရှိနေပါက ထိုသူကိုခေါ်ခိုင်းပါ။ အကယ်၍ တစ်ယောက်မှ မရှိပါက အော်ဟစ်ကာအကူအညီတောင်းပါ။ သတိလစ်နေသောလူနာကို မာကျောသော ကြမ်းပြင် သို့ ခုတင် သို့ ခုံတန်းရှည်ပေါ်တွင်ပက်လက်တင်ထားပါ။
ထို့နောက်လူနာ၏ လေ၀င်လမ်းကြောင်းကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ သူ၏ ပါးစပ်ထဲတွင် အရာဝတ္ကု သွားတု၊ အန်ဖတ်နှင့် ချွဲသလိပ်များရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီး ရှိပါက သင်၏လက်ကို အ၀တ်ပတ်လျှက် သို့ လက်အိတ်ဝတ်လျက် ထိုအရာများကို ဖယ်ထုတ်ပေးပါ။ လူနာ၏လျှာ အနောက်ထဲ ခေါက်ဝင်နေပါက အရှေ့သို့ပြန်လည် ဆွဲယူပြီးသူ၏ နဖူးကိုအောက်သို့ ဖိချကာမေးရိုးကိုတွန်းတင်ခြင်းဖြင့်သူ့မေးရိုးကိုပင့်တင်ပေးလိုက်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လျှာသည် လေ၀င်လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့နေခြင်းမှ လွတ်ကင်းသွားပ့ါလိမ့်မည်။
၄။ ထို့နောက် လူနာ၏ အသက်ရှူမရှူ ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ ၁၀ စက္ကန့် မျှသူ၏ ရင်အုံကြွမကြွ နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်နားတွင် အသက်ကယ်သူက နားနှင့်ကပ်ပြီး လေ၀င်လေထွက်ရှိမရှိ သင့်လက်ဖြင့် နှာခေါင်း သို့ ပါးစပ်မှလေ၀င်လေထွက်ရှိမရှိ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
၅။ အကယ်၍အသက်ရှူပုံမှန်ဖြစ်လျှင်…… လူနာအားနေသာသော အနေအထား Recovery position အနေအထားတွင်ထားကာပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။ အသက်ရှူပုံမှန်မဖြစ်လျှင်…. ရင်ခေါင်းဖိခြင်းကိုစတင်ဆောင်ရွက်ပါ။
-လူနာအသက်ပုံမှန်ရှူမှသာ ရပ်တန့်၍ လူနာအားပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။သို့မဟုတ်ပါက အသက်ကယ်အထောက်အကူပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ခြင်းမပြုပါနှင့်။
-အကယ်၍ အကူတစ်ယောက်အနီးအနားတွင်..ရှိနေပါက အသက်ကယ်အထောက်အကူပြုသူခြေကုန်လက်ပမ်းမကျရန် ၂မိနစ်ပြည့်တိုင်းလူလဲကာ အထောက်အကူပြုပါ။ ထို့သို့လူလဲရာတွင်..အချိန့်ကြန့်ကြာမှု နည်းနိုင်သမျှ နည်းပါစေ။
ရင်ခေါင်းဖိနှိပ်ခြင်းမှာ လူနာ၏ ရင်ညွှန့်ပေါ်မှ မှန်မှန်ဖိပေးခြင်းအားဖြင့် နှလုံးသွေးလည်ပတ်မှုပြန်လည်ဖြစ်လာစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အောက်ခံအမာ သိူ့မဟုတ်.ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် လူနာကိုပက်လက်ထားပါ။ လူနာ၏ ရင်ညွန့်အလယ်နေရာတွင် သင်၏လက်ဝဲဘက် လက်ဖ၀ါးကိုတင်လိုက်ပါ။ထို့နောက်သင်၏ လက်ယာဘက်လက်ဖ၀ါးးကို လက်ဝဲဘက်လက်ဖ၀ါးပေါ်တွင် တင်ပြီး လက်နှစ်ခု ခိုင်မြဲအောင် လက်ချောင်းများကို ယှက်ပေးလိုက်ပါ။
သင့်လက်များ၏ တံတောင်ဆစ်များကို ဖြောင့်မတ်အောင်ဆန့်ထားပြီး သင်၏ ပုခုံးအားဖြင့် လူနာ၏ ရင်ညွှန့်အလယ်ကိုဖိပေးးပါ။ ရင်ခေါင်းပေါ်သို့ ဖိနှိပ်သောအခါ နှလုံးမှညစ်ထုတ်လိုက်သောသွေးများသည် ကိုယ်ထဲသို့ စီးဝင်သွားပြီး ဖိအားကိုပြန်လျော့ပေးပါက သွေးပြန်ကြောထဲမှ သွေးများသည် နှလုံ့းထဲသို့ပြန်လည်စီးဝင်ကာ သွေးလည်ပတ်မှုကိုပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဖိအားသည်ရင်ညွန့် ကို ၄ မှ ၅ စင်တီမီတာ ၁လက်မှခွဲမှ ၂လက်မခွဲ ခန့်ကျွံဝင်စေရမည်။
သင်၏ ပါးစပ်မှ အချက်ညီအောင် ၁ခါ ၂ခါ ၃ခါ ၄ခါ စသည်ဖြင့် ရေတွက်ပြီးအခါ ၃၀ ဟုရေတွက်ပြီတိုင်း ရင်ခေါင်းဖိခြင်းးကို ခေတ္က ရပ်နား၍ လူနာ၏ပါးစပ်ထဲသို့ သင့်ပါးစပ်ဖြင့် လေ၂ခါမျှဆက်တိုက်မှုတ်သွင်းပါ။ တစ်ခါမှုတ်သွင်းလျှင် တစ်စက္ကန့်မျှကြာစေပြီး လူနာ၏ ရင်ခေါင်းကြွတက်လာမှ အဆုတ်ထဲသို့ လေ၀င်သည်မှာသေချာမည်။လေမှုတ်သွင်းနေစဉ် လေပြွန်ပွင့်နေစေရန် အလို့ငှါ ခေါင်းကိုဖိ၍ မေးရိုးကို မတင်ထားသော အနေအထားတွင်ရှိပါစေ။
၃။ တံတောင်ဆစ်များကိုဖြောင့်ဖြောင့်ထားပါ။ /၃။တံတောင်ဆစ်များကိုမကွေးပါနှင့်။
၆။ပခုံးအားဖြင့် ဖိပါ။ /၆။လက်အားဖြင့်မဖိပါနှင့်။
၇။လူနာမှာအောက်ခံအမာကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ရှိစေရမည်။ /၇။လူနာကိုစပရိန်ခုံတင် မွေ့ရာအပျော့ပေါ်တွင်မရှိစေရ။
လူနာအသက်ရှူမှန်ပြီဟုယူဆမှသာ ရပ်ကာစစ်ဆေးပါ။ သို့မဟုတ်ပါက ရင်ခေါင်းဖိနှိပ်ခြင်းနှင့် လေမှုတ်သွင်းခြင်းကို မရပ်တန့်ပါနှင့်။ နောက်ထပ် အကူပြုစုသူရှိပါက မပင်ပန်းစေရန် အလို့ငှါ ၂မိနစ်ပြည့်ပြီးတိုင်းလူလဲပါ။ လူလဲသည့်အခါတိုင်းကြန့်ကြာမှု အနည်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
အခွခေံအသကျကယျ အထောကျအကူပွုနညျး (unicode)
ရေးသားသူ – ကောငျးကွီး(မွနျမာအငျဂငျြနီယာဖိုရမျ)
ကြှနျတျောတို့ကြောငျးမှာ သငျတဲ့ရကျတိုသငျတနျးလေးကတဈဆငျ့ပွနျလညျမြှဝပေေးပါ့မယျ။ လူတိုငျးနီးပါးသိထားသငျ့တယျထငျလို့ပါ…မိမိခဈြခငျတဲ့သူတဈယောကျကို မိမိကိုယျတိုငျ..အသကျကယျခှငျ့ ကွုံလာရငျအသုံးခနြိုငျအောငျပါ…
ရုတျတရကျ အသကျရှူခွငျးနှငျ့.နှလုံးခုနျ ရပျသှားခဲ့သော လူနာတဈယောကျကို အသကျကယျလိုပါလြှငျ ကှငျးဆကျ ၄ ခုကိုမနှောငျ့မနှေး ဆကျတိုကျ အမွနျဆုံးဆောငျရှကျပေးရနျအထူးလိုအပျပါသညျ.။
ပထမကှငျးဆကျကလူနာ လဲကသြှားသညျနှငျ့ တပွိုငျနကျ အနီးအနားရှိသူတဈဦးက ခကျြခငျြးဆေးရုံ ဆေးခနျးမြားအားအကွောငျးကွားရနျလိုအပျပါသညျ။
ဒုတိယကှငျးဆကျက ထိူသူကပငျ လူနာရဲ့နှလုံးပုံမှနျပွနျလညျခုနျလာပွီး အသကျပွနျရှူလာအောငျအမွနျဆုံး..အခွခေံအသကျကယျနညျးအထောကျအကူပွုနညျးကို သုံးရမှာဖွဈပါတယျ။
တတိယကှငျးဆကျကတော့ ဆေးရုံဝနျထမျးမြားရောကျရှိလာပွီး လူနာကို ဆေးရုံအရေးပျေါဌာန သို့ပို့ကာနှလုံးနှိုးဆကျ defibrillator တို့ကိုသုံးကာ နှလုံးကိုအမွနျဆုံးပွနျလညျခုနျလာအောငျပွုလုပျခွငျးဖွဈပါတယျ။
နောကျဆုံးကှငျးဆကျကတော့ လိုအပျပါက အထူးကွပျမတျဆောငျတှငျ အသကျရှူ အထောကျအကူပွုစကျ စသညျတို့ဖွငျ့ အသကျရှုပုံမှနျဖွဈသှားသညျအထိ အမွနျဆုံးအဆငျ့မွငျ့ စောငျ့ရှောကျကုသမှု ဆောငျရှကျရမညျဖွဈပါတယျ။
ရုတျတရကျ အသကျဆုံးရှူံးစနေိုငျသော အကွောငျးအရာမြား
နှလုံးရောဂါ ဟူသမြှသညျ နှလုံးခုနျခွငျးကို ရုတျတရကျရပျတနျ့စနေိုငျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ နှလုံးသှေးကွောပိတျသှားလြှငျ နှလုံးခုနျ ရုတျတရတျ ရပျသှားတတျပါသညျ။သို့ဖွငျ့ နှလုံးသှေးကွောပိတျသညျ့ လူနာမြား၏ ထကျဝကျမြှသညျ ဆေးရုံသို့ မရောကျနိုငျဘဲ ဖွဈသညျ့နရောတှငျပငျ ရုတျခညျြးအသကျဆုံးရှုံးတတျပါသညျ။
အရာဝတ်ကုမြားကွောငျ့ အသကျရှူလမျးကွောငျး ပိတျဆို့သှားပါကလညျး အသကျရှူရပျပွီး ၄-၅မိနဈအတှငျး နှလုံးခုနျပါရပျတနျ့သှားနိုငျပါသညျ။ ကလေးမြားတှငျ မကွာခဏ လဝေငျလမျးကွောငျး ကိုအရာဝတ်ကုမြားပိတျဆို့တတျပါသညျ။ လူကွီးမြား အစားအစာ ပိတျဆို့ကာသျောလညျးကောငျး သတိမမွေ့ောနစေဉျ ပါးစပျထဲရှိ သှားတုမြား အနျဖတျမြားပိတျဆို့သှားကာသျောလညျးကောငျး သို့မဟုတျ လြှာအနောကျသို့ ခေါကျဝငျသှားကာသျောလညျးကောငျး ရုတျတရကျ အသကျရှူလမျးကွောငျး ပိတျဆို့ပွီး အသကျရှူ နှလုံးခုနျ ရပျသှားနိုငျပါသညျ။
ရနေဈလြှငျ အသကျရှူရပျပွီး မကွာမီ နှလုံးခုနျပါရပျတနျ့သှားစပေါသညျ။
လဖွေတျသူတှငျ အသကျရှူခွငျးကို ထိနျးခြုပျသညျ့ ဦးနှောကျ၏ အစိတျအပိုငျးတှငျသှေးကွောပိတျ သှေးယိုသှားပါက ရုတျခညျြးအသကျရှူရပျပွီး မကွာမီ နှလုံးခုနျပါ ရပျတနျ့သှားနိုငျပါသညျ။
အခြို့သောဆေးမြား..အလှနျအကြှံသောကျသုံးမိပါကလညျးအသကျရှူခွငျးကို ထိနျးခြုပျသညျ့ ဦးနှောကျအစိတျအပိုငျးပကျြစီးပွီး နှလုံးခုနျပါရပျတနျ့နိုငျပါသညျ။
၆။ မီးခိုးမြား ရှူမိခွငျး
မီးလောငျစဉျအတှငျး မီခိုးမြားကိုရှုမိလြှငျလညျးအသကျရှူရပျကာ အသကျဆုံးနိုငျပါသညျ။
ရငျခေါငျးပွငျးထနျစှာဒဏျရာရလြှငျလညျး နှလုံးခုနျ အသကျရှူရပျနိုငျပါသညျ (ကားတိုကျမှု)
အထကျပါဖျောပွပါ အခွအေနမြေားတှငျ လူနာမြားအား အခြိနျမီ ကယျမညျ့သူ မရှိလြှငျ ရာနှုနျးပွညျ့ အသကျဆံုးရူံးရမညျဖွဈပါသညျ။ လူတဈဦးတဈယောကျသညျ အသကျ ရှူခွငျးနှငျ့ နှလုံးခုနျ ရပျသှားသညျကို ယဘေုယအြားဖွငျ့ သသေညျ ဟု မှတျခကျြခလြရှေိ့ပါသညျ။ သို့ရာတှငျ ဘေးပတျဝနျးကငျြရှိ တဈဦးတဈယောကျက ၄မိနဈ မှ ၆မိနဈ အတှငျး လငျြမွနျဖွတျလတျစှာ အခွခေံအသကျကယျအထောကျအကူပွုနညျးကို ကငျြ့သုံးပေးပါက လူနာမြား၏ ထကျဝကျသညျ အသကျပွနျလညျ ရှငျလာနိုငျသညျဖွဈပါသဖွငျ့ လူတိုငျးသညျ အခွခေံအသကျကယျအထောကျအကူပွုနညျးကို ကငျြလညျမှနျကနျမွနျဆနျစှာ ကငျြ့သုံးပေးတတျရနျ လိုအပျသညျကို အသိပေးနှိုးဆျောလိုပါသညျ။
ယဘေုယအြားဖွငျ့ နှလုံးရပျသှားသညျကို သသေညျဟု လကျသငျ့ခံ ထားသညျ။ နှလုံးကို ၄မိနဈမှ၆မိနဈ အတှငျးပွနျလညျ ခုတျမောငျးအောငျပွုလုပျမပေးနိုငျပါက ဦးနှောကျပကျြဆီးသှားသညျဟု ဇီဝဆိုငျရာ သဆေုံးခွငျးဟုချေါတှငျပွီးထိုအခွအေနဖွေဈလာလြှငျလူဧ။ျအသကျကို ရှငျလာနိုငျရနျမညျသို့မြှ မဆောငျရှကျနိုငျတော့ပါ။
၀-၄ မိနဈ ဦးနှောကျပကျြဆီးမှုမရှိသေး။
၄-၆မိနဈ ဦးနှောကျပကျြဆီးမှု ဖွဈနိုငျခရြှေိ။
သို့ဖွဈ၍ လူနာတဈယောကျသညျ အသကျရှူ နှလုံးခုနျရပျသှားလြှငျ ၄မိနဈမှ၆မိနဈ အတှငျးအခွခေံအသကျကယျအထောကျအကူပွုနညျးဖွငျ့ ကယျတငျရနျအလငျြအမွနျ ကွိုးပမျးရမညျဖွဈကွောငျးသိရှိထားရနျလိုအပျပါသညျ။
၁။ လူနာနှငျ့ ဘေးအနီးရှိ အခွခေံအသကျကယျ အထောကျအကူပွုမညျ့သူကို စိတျခရြသောနရော တှငျရှိမရှိစဈဆေးပါ။ လူနာကိုကယျဖို့ကွိုးစားရငျး.မိမိပါအသကျကိုထိခိုကျနိုငျမှုကငျးအောငျပါ။ ဥပမာ..မီးလောငျနတေဲ့အိမျထဲမှာ….
၂။ ရုတျတရကျလဲကသြှားသောသူအား ပထမဦးစှာ သတိရှိမရှိ ဆနျးစဈကွညျ့ရမညျ။ လူနာ၏ ပခုံးနှဈဖကျကို ကိုငျလှုပျ၍ သတိရသလား ဟုကယျြလောငျစှာအျော၍ မေးပါ။
၃။ လူနာသတိရှိပါက လူနာနသောသောအနအေထားတှငျ ထား၍ပုံမှနျပွနျလညျစဈဆေးပါ။
လူနာသတိမရှိပါက အရေးပျေါလူနာတငျယာဉျကိုချေါပါ။ ဘေးပတျဝနျးကငျြတှငျအခွားသူတဈယောကျရှိနပေါက ထိုသူကိုချေါခိုငျးပါ။ အကယျ၍ တဈယောကျမှ မရှိပါက အျောဟဈကာအကူအညီတောငျးပါ။ သတိလဈနသေောလူနာကို မာကြောသော ကွမျးပွငျ သို့ ခုတငျ သို့ ခုံတနျးရှညျပျေါတှငျပကျလကျတငျထားပါ။
ထို့နောကျလူနာ၏ လဝေငျလမျးကွောငျးကို ဆနျးစဈကွညျ့ပါ။ သူဧ။ျပါးစပျထဲတှငျ အရာဝတ်ကု သှားတု၊ အနျဖတျနှငျ့ ခြှဲသလိပျမြားရှိမရှိ စဈဆေးပွီး ရှိပါက သငျ၏လကျကို အဝတျပတျလြှကျ သို့ လကျအိတျဝတျလကျြ ထိုအရာမြားကို ဖယျထုတျပေးပါ။ လူနာဧ။ျလြှာ အနောကျထဲ ခေါကျဝငျနပေါက အရှသေို့ပွနျလညျ ဆှဲယူပွီးသူဧ။ျနဖူးကိုအောကျသို့ ဖိခကြာမေးရိုးကိုတှနျးတငျခွငျးဖွငျ့သူ့မေးရိုးကိုပငျ့တငျပေးလိုကျပါ။ ထိုသို့ပွုလုပျခွငျးဖွငျ့ လြှာသညျ လဝေငျလမျးကွောငျးကို ပိတျဆို့နခွေငျးမှ လှတျကငျးသှားပါ့လိမျ့မညျ။
၄။ ထို့နောကျ လူနာ၏ အသကျရှူမရှူ ဆနျးစဈကွညျ့ပါ။ ၁၀ စက်ကနျ့ မြှသူဧ။ျ ၇ငျအုံကွှမကွှ နှာခေါငျးနှငျ့ ပါးစပျနားတှငျ အသကျကယျသူက နားနှငျ့ကပျပွီး လဝေငျလထှေကျရှိမရှိ သငျ့လကျဖွငျ့ နှာခေါငျး သို့ ပါးစပျမှလဝေငျလထှေကျရှိမရှိ စမျးသပျကွညျ့ပါ။
၅။ အကယျ၍အသကျရှူပုံမှနျဖွဈလြှငျ…… လူနာအားနသောသော အနအေထား Recovery position အနအေထားတှငျထားကာပွနျလညျစဈဆေးပါ။ အသကျရှူပုံမှနျမဖွဈလြှငျ…. ရငျခေါငျးဖိခွငျးကိုစတငျဆောငျရှကျပါ။
-လူနာအသကျပုံမှနျရှူမှသာ ရပျတနျ့၍ လူနာအားပွနျလညျစဈဆေးပါ။သို့မဟုတျပါက အသကျကယျအထောကျအကူပွုခွငျးကို ရပျတနျ့ခွငျးမပွုပါနှငျ့။
-အကယျ၍ အကူတဈယောကျအနီးအနားတှငျ..ရှိနပေါက အသကျကယျအထောကျအကူပွုသူခွကေုနျလကျပမျးမကရြနျ ၂မိနဈပွညျ့တိုငျးလူလဲကာ အထောကျအကူပွုပါ။ ထို့သို့လူလဲရာတှငျ..အခြိနျ့ကွနျ့ကွာမှု နညျးနိုငျသမြှ နညျးပါစေ။
ရငျခေါငျးဖိနှိပျခွငျးမှာ လူနာ၏ ရငျညှနျ့ပျေါမှ မှနျမှနျဖိပေးခွငျးအားဖွငျ့ နှလုံးသှေးလညျပတျမှုပွနျလညျဖွဈလာစရေနျ ဆောငျရှကျပေးခွငျးဖွဈပါသညျ။ အောကျခံအမာ သိူ့မဟုတျ.ကွမျးပွငျပျေါတှငျ လူနာကိုပကျလကျထားပါ။ လူနာ၏ ရငျညှနျ့အလယျနရောတှငျ သငျဧ။ျလကျဝဲဘကျ လကျဖဝါးကိုတငျလိုကျပါ။ထို့နောကျသငျ၏ လကျယာဘကျလကျဖဝါးကို လကျဝဲဘကျလကျဖဝါးပျေါတှငျ တငျပွီး လကျနှဈခု ခိုငျမွဲအောငျ လကျခြောငျးမြားကို ယှကျပေးလိုကျပါ။
သငျ့လကျမြား၏ တံတောငျဆဈမြားကို ဖွောငျ့မတျအောငျဆနျ့ထားပွီး သငျ၏ ပုခုံးအားဖွငျ့ လူနာဧ။ျရငျညှနျ့အလယျကိုဖိပေးပါ။ ရငျခေါငျးပျေါသို့ ဖိနှိပျသောအခါ နှလုံးမှညဈထုတျလိုကျသောသှေးမြားသညျ ကိုယျထဲသို့ စီးဝငျသှားပွီး ဖိအားကိုပွနျလြော့ပေးပါက သှေးပွနျကွောထဲမှ သှေးမြားသညျ နှလုံ့းထဲသို့ပွနျလညျစီးဝငျကာ သှေးလညျပတျမှုကိုပွနျလညျဖွဈပျေါစပေါသညျ။ ဖိအားသညျရငျညှနျ့ ကို ၄ မှ ၅ စငျတီမီတာ ၁လကျမှခှဲမှ ၂လကျမခှဲ ခနျ့ကြှံဝငျစရေမညျ။
သငျ၏ ပါးစပျမှ အခကျြညီအောငျ ၁ခါ ၂ခါ ၃ခါ ၄ခါ စသညျဖွငျ့ ရတှေကျပွီးအခါ ၃၀ ဟုရတှေကျပွီတိုငျး ရငျခေါငျးဖိခွငျးကို ခတ်ေက ရပျနား၍ လူနာ၏ပါးစပျထဲသို့ သငျ့ပါးစပျဖွငျ့ လေ၂ခါမြှဆကျတိုကျမှုတျသှငျးပါ။ တဈခါမှုတျသှငျးလြှငျ တဈစက်ကနျ့မြှကွာစပွေီး လူနာ၏ ရငျခေါငျးကွှတကျလာမှ အဆုတျထဲသို့ လဝေငျသညျမှာသခြောမညျ။လမှေုတျသှငျးနစေဉျ လပွှေနျပှငျ့နစေရေနျ အလို့ငှါ ခေါငျးကိုဖိ၍ မေးရိုးကို မတငျထားသော အနအေထားတှငျရှိပါစေ။
၃။ တံတောငျဆဈမြားကိုဖွောငျ့ဖွောငျ့ထားပါ။ /၃။တံတောငျဆဈမြားကိုမကှေးပါနှငျ့။
၆။ပခုံးအားဖွငျ့ ဖိပါ။ /၆။လကျအားဖွငျ့မဖိပါနှငျ့။
၇။လူနာမှာအောကျခံအမာကွမျးပွငျပျေါတှငျရှိစရေမညျ။ /၇။လူနာကိုစပရိနျခုံတငျ မွေ့ရာအပြော့ပျေါတှငျမရှိစရေ။
လူနာအသကျရှူမှနျပွီဟုယူဆမှသာ ရပျကာစဈဆေးပါ။ သို့မဟုတျပါက ရငျခေါငျးဖိနှိပျခွငျးနှငျ့ လမှေုတျသှငျးခွငျးကို မရပျတနျ့ပါနှငျ့။ နောကျထပျ အကူပွုစုသူရှိပါက မပငျပနျးစရေနျ အလို့ငှါ ၂မိနဈပွညျ့ပွီးတိုငျးလူလဲပါ။ လူလဲသညျ့အခါတိုငျးကွနျ့ကွာမှုအနညျးဆုံးဖွဈပါစေ။
Posted in Knowledge, To KnowTagged knowledge, tips, to know
Previous post အင်ဂျင်နီယာသမိုင်းရဲ့ နံပါတ် ၁ ကမ္ဘာ့အံဖွယ် (သို့) ချန်နယ်ရေအောက်တူးမြောင်း
Next post ကမ္ဘာပေါ်က ဒီဇိုင်းအဆန်းဆုံး အဆောက်အဦးများ